Angovo avy amin’ny masoandro : homena ny fiofanana ny vehivavy any Avaratra | NewsMada
Angovo avy amin’ny masoandro : homena ny fiofanana ny vehivavy any Avaratra
Manana ny mampiavaka azy manokana ny faritra havoana, Avaratry ny Nosy. Kendrena ho fiarovana ireo biby sy zavaboary samihafa amin’izany toerana izany ny famatsiana angovo avy amin’ny masoandro ataon’ny ONG indianina Barefoot college.
Tanjona faritan’io ONG Barefoot college io, miaraka amin’ny WWF ny politika fiarovana any am-potony sy ny fitantanana mirindra ireo harena voajanahary eto Madagasikara, amin’ny alalan’ny angovo avy amin’ny masoandro ao Andranomilolo, any Andapa. Fiarovana ny tontolo iainana ny fanatsarana ny fari-piainan’ny mponina ataon’ireo « Vehivavy teknisianina amin’ny masoandro ». Nosafidina hanaraka fiofanana momba izany, i Soavinera, Mamisoa Madeleine, Nary Louise ary Kalozandry.
Tsy voalohany nataon’ny Barefoot college izany eto Madagasikara. Efa nisy tany Iavomanitra sy Tsaratanàna, nahazoan’ireo toerana roa lavitra ireo angovo avy amin’ny masoandro. Hofanina izay vehivavy zara raha nahita fianarana sady tsy manana andraikitra eo amin’ny toerana misy azy, mba ho lasa teknisianina mahafehy tsara ny fampiasana angovo avy amin’ny masoandro. Enim-bolana ny faharetan’ny fiofanana any Inde, hiarahan’ireo vehivavy malagasy amin’ny vehivavy avy amin’ny firenen-kafa, mitovy aminy.
Fiantohana maharitra ny famatsian-jiro
Andraikitr’izy ireo rehefa miverina an-tanindrazana ny fiantohana maharitra ny famatsian-jiro amin’izay misy azy. “Hanitarana ny tetikasa ao Andranomilolo ny fahombiazana hita taratra any amin’ireo tanàna roa voalohany lavi-toerana nanaovana azy. Tsy ny fahazoan’ny tokantrano maro fahazavana ihany ny antony fa indrindra koa ny fahavitrihan’ireo vehivavy mitondra ny anjarany amin’ny fampandrosoana any aminy”, hoy Randriambola Voahirana, manam-pahaizana manokana amin’ny angovo ao amin’ny WWF.